Safety niteraka azy Cabinets Factory, Suppliers | China biolojika Safety Cabinets Manufacturers
Home » Products » Laboratory Fitaovana » Safety niteraka Cabinets
Amin'ny lalana lehibe firaketana ny fiarovana, azo itokisana sy fampisehoana, HFsafe LC cabinets ho tonga lafatra ny fampiasam-bola ho an'ny isan-karazany ao anatin'izany ny fampiharana asa amin'ny areti mpiasa izay mitaky Biosafety Level 1, 2 na 3 containment.
HFsafe 900/1200/1500/1800 (maotera Type)
Sitrano Force HFsafe biosafety cabinets nametraka ny fenitra eo amin'ny toetra, famolavolana, ary ny fanavaozana avy amin'ny lova maherin'ny 25 taona traikefa. Sitrano amin'ny Force dia fantatsika fa zava-dehibe mba hanolotra ny avo lenta ny fiarovana ny mpandraharaha, vokatra sy ny tontolo iainana amin'ny mandroso ny teknolojia. Amin'ny lalana lehibe firaketana ny fiarovana, azo itokisana sy fampisehoana, HFsafe cabinets ho tonga lafatra ny fampiasam-bola ho an'ny isan-karazany ahitana ny fampiharana asa amin'ny areti mpiasa izay mitaky Biosafety Level 1, 2 na 3 containment.
HFsafe 900/1200/1500/1800 (Boky Torolàlana Type)
Sitrano Force HFsafe biosafety cabinets nametraka ny fenitra eo amin'ny toetra, famolavolana, ary ny fanavaozana avy amin'ny lova maherin'ny 25 taona traikefa. Ny Taona faha-II Type A2 modely amin'ny asa boky varavarana, manome ny lalana lehibe firaketana ny fiarovana, azo itokisana sy ny fampisehoana.